CHPW Daryeelka Virtual - Caymiska Caafimaadka Deegaanka ee Gobolka Washington - CHPW
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > Kheyraadka Xubinta > Qorshahaaga iyo Daboolidaada > Daryeelka Virtual CHPW
Kala hadal dhakhtar shati haysta taleefan ama fiidiyoow wakhti kasta, maalin ama habeen, adigoon gurigaaga ka bixin.
Ku soo dhowow daryeelka caafimaad ee CHPW: Dhakhtarku wuu ku arki doonaa hadda, runtii!
Marwalba ma sahlana inaad la kulanto dhakhtar markaad rabto. Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington Daryeelka Virtual CHPW Adeeggu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad la hadasho dhakhtar shati haysta 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii - xitaa marka rugtaada caafimaad ama xafiiska dhakhtarka caadiga ahi xiran yahay. Kharashka booqashada caafimaad ee la taaban karo waxay la mid tahay booqashada qofka.
Daryeelka Virtual, sidoo kale loo yaqaan telehealth ama telemedicine, waa adeegsiga tikniyoolajiyadaha isgaarsiinta (sida taleefannada gacanta iyo fiidiyoowga tooska ah) ee bixiyeyaasha caafimaad ay kuugu fidiyaan daryeelka adiga.
Taasi waxay ka dhigan tahay halkii aad ka sugi lahayd oo walwal lahayn, waxaad la booqan kartaa dhakhtar daqiiqado gudahood, adigoon ka bixin gurigaaga.
Hubi si aad u ogaato haddii rugta caafimaadka ee bulshada ama takhtarka daryeelka aasaasiga ah ee aad inta badan aadeyso uu bixiyo Daryeelka Farsamada. Hadday sidaas sameeyaan, waxay kuu sheegi doonaan sida loo dejiyo ballantaada daryeelka dhijitaalka ah.
Haddii adeeg bixiyahaagu uusan bixin taleefan oo aadan ka heli karin rugta caafimaadka ama xafiiska dhakhtarka, markaa waad isticmaali kartaa Daryeelka Virtual CHPW adoo dooranaya mid ka mid ah xulashooyinka soo socda:
on a computer tag: chpwvirtualcare.org oo isdiiwaangali ama gasho sida lagu faray.
Haddii aad isticmaalayso a Apple telefoonka gacanta:
Taabo barnaamijka App Store ee shaashadaada guriga.
Baadh ama ka raadi “Daryeelka Virtual CHPW ” app oo soo dejiso. Fur barnaamijka oo isdiiwaangali ama gal sida lagu faray inaad ballan qabsato.
Haddii aad isticmaalayso a Android telefoonka gacanta:
Fur Google Play.
Waad ballansan kartaa booqasho wakhti go'an ama waad dalban kartaa booqashada "sida ugu dhakhsaha badan". Diyaarso macluumaadkaaga caymiska CHPW. Dhaqtar shati ka haysta Daryeelka Virtual CHPW kula xiriiri doona taleefan ama muuqaal.
Ma u baahan tahay caawimaad? Haddii aadan hubin haddii Daryeelka Virtual CHPW uu yahay dariiqa saxda ah, waxaad had iyo jeer ka wici kartaa khadka talobixinta Kalkaalisada 24/7 ee CHPW 1-866-418-2920 (TTY: Garaac 711) caawimaad. Wixii ku saabsan taageerada farsamada ee daryeelka farsamada, fadlan soo wac 1-855-994-6777 ama email [emailka waa la ilaaliyay].
Daryeelka Virtual wuxuu kugu kacayaa $ 0
The Daryeelka Virtual CHPW adeegga waxaa lagu soo daray qeyb ka mid ah caymiskaaga CHPW Apple Health (Medicaid). Ma jiraan wax lacag-bixinno ah iyo lacag-bixinno lama filaan ah oo biil ah.
Sidoo kale wax lacag ah lagama qaadayo haddii aad u baahan tahay inaad kansasho ama aad jadwal kale u dhigato a Daryeelka Virtual CHPW balanta.
Waa inaad u tagtaa dhakhtarka daryeelka caafimaad ee loo yaqaan 'CHPW Virtual Care' oo keliya cuduro aan degdeg ahayn. Khadkayaga Talada Kalkaalisada, oo ay ku shaqeeyso CHPW, ayaa kaa caawin kara inaad go'aansato haddii aad u baahan tahay daryeel degdeg ah ama isbitaalka ama aad u tagto dhakhtarka Daryeelka Virtual. Iyo, had iyo jeer, haddii aad qabtid xaalad caafimaad oo degdeg ah, wac 911.
Dhakhtarka daryeelka caafimaad ee loo yaqaan 'CHPW Virtual Care' uma gudbiyo dhakhaatiirta takhasuska leh ama bixiyeyaasha kale. Dhakhtarku wuxuu fakis uga diri karaa booqashadaada Bixiyaha Daryeelkaaga Aasaasiga ah haddii aad rabto inaad dabagal ku sameyso.
Daryeelka Virtual CHPW dhakhaatiirta ayaa kuu qori kara daawooyinka haddii ay u maleeyaan inay lagama maarmaan tahay. Daawooyinka daawada laguu soo diro ayaa elektaroonig ahaan ama taleefan loogu diraa farmasiga shabakadda ee aad dooratay. Daawooyinka sidoo kale boostada ayaa laguguugu soo diri karaa haddii farmashiyahaagu bixiyo adeeg dalab oo xubnaha CHPW ah.
Ka akhriso wax dheeraad ah oo ku saabsan dheefaha daawada ee ku qoran bartayada Bogga Caymiska Qoraalka.
Taariikhda Ugu Dambeysa ee Taariikhda: Febraayo 1, 2021